Ahoana ny fomba hisorohana ny fandaniana tsy ampoizina amin'ny toekarena anatiny | Bezzia
Bezzia | 29/09/2021 10:36 | Nohavaozina amin'ny 29/09/2021 10:38 | an-trano
Ny fomba tsara indrindra hikarakarana ny toekarena anatiny dia fitantanana tsara ny teti-bolan'ny fianakaviana, saingy tsy antoka ho an'ny fahombiazana izany. Satria, na dia tantanana amin'ny fomba hentitra aza ny harem-pianakaviana, ny zavatra tsy ampoizina dia zavatra tsy azo vinavinaina mialoha. Noho izany, ny fomba tokana hiatrehana azy ireo dia amin'ny fisintomana ny tahiry, raha manana izany ianao, na amin'ny alàlan'ny fiantohana trano fiantohana.
Ny fananana fiantohana ny tranonao dia ny fomba tsara indrindra hiantohana ny fiadanan-tsaina manoloana ny fandaniana tsy ampoizina. Azonao atao ny mividy fiantohana amin'ny alàlan'ny orinasa fiantohana an-tserasera toa ny Verti, amin'ny alàlan'ny fiantsoana na fakan-kevitra amin'ny Internet momba ireo mpiantoka isan-karazany sy karazana fiantohana. Na ahoana na ahoana, tsy hita isa ny tombony.
1 Tombony azo amin'ny fividianana fiantohana an-trano
1.1 Ilay kaontinanta
1.2 Ny votoatiny
1.3 Andraikitra sivily
2 Fiarovana amin'ny fanamboarana, halatra, afo, ...
Tombony azo amin'ny fividianana fiantohana an-trano
Amin'ny ankapobeny, ny fiantohana an-trano dia misy andiany fandrakofana fototra, izay ahazoana mifampiraharaha amin'ny vidiny samihafa ny fepetra nohatsaraina. Ity ambany ity ny lisitr'ireo firakotra mahazatra.
Ny kaontinanta dia ny firafitry ny trano toy izany, izany hoe, ny valindrihana, ny rindrina sy ny fizara, ny gorodona, ny tamba-jotra elektrika, ny fantsona sy izay rehetra ao anatin'ny fananana. Miankina amin'ny habe sy ny karazany ao an-trano dia isaina ny vola aloa mba hiantohana azy io.
Araka ny tondroin'ilay anarana dia momba ilay izy ny zavatra rehetra izay fitaovana ao an-trano: fanaka, fitaovana, teknolojia, firavaka, fitafiana ary entana manokana.
Ity antoka fototra amin'ny fiantohana an-trano rehetra ity manarona ny fahavoazana mety hitranga amin'ny antoko fahatelo, ohatra, ny fivoahana, ny fivoahana, ny vaky fitaratra sns.
Fiarovana amin'ny fanamboarana, halatra, afo, ...
Amin'ireto fonosana fototra ireto ao an-tsaina, ny tombony azo avy amin'ny fananana fiantohana trano tsara dia lehibe. Raha misy fanamboarana, ohatra, na manamboatra fantsona tapaka, ny fametrahana herinaratra, na ny olana amin'ny fivoahan'ny rano, mavesatra matetika ny faktiora, ka manana fiantohana fa ho lany ny fandaniana.
Antony lehibe iray hafa tokony hodinihina koa ny halatra. Na any an-trano ianao na any am-pialan-tsasatra, dia mety hitranga ny halatra amin'ny fotoana rehetra. Tsy ny fangalarana zavatra fotsiny izany, fa ny fahasimbana sy ny fatiantoka ara-toekarena izay misy lanja lehibe indraindray. Ny fiantohana an-trano dia afaka manefa ny halatra rehetra raha voalaza ao amin'ny politika izany.
Ny afo Izy ireo koa dia antony tsara hiantohana trano, satria, na dia toa somary tsy dia mampahery aza izany, any Espana aman'arivony maro amin'izy ireo no vokarina isan-taona noho ny olan'ny herinaratra. Ny fatiantoka amin'ny afo dia mety ho avo dia avo.
La hafainganam-pandehan'ny hetsika Ity dia iray amin'ireo tombony sarobidy indrindra rehefa mandray fiantohana trano. Ny teknisiana dia mandeha any amin'ny trano simba faran'izay haingana, ary ny fandrakofana dia mandaitra amin'ny fotoana mety.
Ho an'ny fanampiana ara-pitsaboana sy ara-dalànaNy ankamaroan'ny politikam-piantohana amin'ity karazana ity dia misy ny famindrana fiara mpamonjy voina raha sendra lozam-pifamoivoizana na aretina ary serivisy fitsaboana maika hafa. Ho fanampin'izay, raha sendra fifandonana ara-dalàna dia atolotra ny torohevitra sy ny fiarovana ara-dalàna izay afaka manefa ny vola lany amin'ny fotoam-pitsarana, toy ny fitoriana momba ny fahasimban'ny fiarovana heloka bevava, ny fitoriana sns.
Ankoatr'izay, na dia maro aza ny olona tsy mahalala an'io, Miaro ny mpianakavy rehetra, anisan'izany ny biby fiompy, ny fandraisana fiantohana an-trano. Ny ankamaroan'ireto vokatra ireto dia misy ny fandrakofana ho tompon'andraikitra amin'ny raharaham-pirenena raha toa ka miteraka fahasimbana ara-nofo na fanimbana manokana ho an'ny antoko fahatelo ny biby fiompy, ankoatry ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Ahoana ny fomba hisorohana ny fandaniana tsy ampoizina eo amin'ny toekarena anatiny
Henna eo amin'ny volomaso: Jereo hoe inona no azony atao ho anao!